ယခု အပတ် ပြည်တွင်း အထူး သတင်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ယခု အပတ် ပြည်တွင်း အထူး သတင်းများ
ယခု အပတ် ပြည်တွင်း အထူး သတင်းများ
Posted by Bayote on Apr 1, 2010 in Myanma News, News |0comments
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် သတင်းများ
Advanced Web Design Course နှင့် Database Administration and Programming Course သင်တန်းများအ တွက် ICTTI သင်တန်းဌာနမှ Software Development သင်တန်းနှင့် IMCEITS သင် တန်းဌာနမှ သင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Adva- nced Java Framework-based Development Course သင်တန်းအတွက် Java Fun- damental အခြေခံရှိသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Advanced Server Course (Virtu- alization and LDAP)သင်တန်းအတွက် ICTTI Network Development သင်တန်း တက်ရောက်ပြီးသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Advanced Network Course (Ciso Switching & Routing) သင်တန်းအတွက် ICTTI Network Development သင်တန်း တက်ရောက်ပြီးသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းများပြီးဆုံးပါက သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ (JICA)တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ပေးအပ်မည့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးချနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီအဆင့် မြင့် အောင်လက်မှတ်များ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းများအား လျှောက်ထားလို သူများသည် B.C.Sc/B.C. Tech./B.Tech/B.E.(IT)/M.A.ScM.I.Sc./M.C.Tech./ M.E.(IT) ဘွဲ့တစ်ခုခုရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ မိမိနှင့်တကွမိဘနှစ်ပါးလုံး ပြည်ထောင်စုမြန်မာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော ၀င်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများအား အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာန၌ တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေသူဖြစ်ပါက ၀န်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ပေးထားသော ကတိခံ ၀န်ချက်များအား လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အခြားဝန်ကြီးဌာနများမှ ၀န်ထမ်းဖြစ်ပါက လျှောက် ထားလိုသူများသည် မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဌာန အကြီးအကဲ၏ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် ပြုကြောင်း ခွင့်ပြုအမိန့်စာ ပါရှိရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ရဲစခန်းမှ (၃)လထက် မ ကျော်လွန်သည့် အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံစာများအား သင်တန်း လျှောက်လွှာနှင့် အတူပူးတွဲလျှောက်ထားရမည်။ သင်တန်း လျှောက်ထားသူများသည် ၅-၄-၂၀၁၀ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီမှစ၍ ICTTI သင်တန်းဌာန ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္က သိုလ်(လှိုင်)တွင် Online ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုကြရမည်ဖြစ်သည်။လျှောက်လွှာများ ကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(လှိုင်) ICTTI သင်တန်းဌာနနှင့် ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(လှော်ကား) ကျောင်းသားရေးရာ ဌာနတို့တွင် ၃၁-၃- ၂၀၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်သည်။ အခြားသိရှိလိုပါက ရန်ကုန် ကွန်ပျူတာက္ကသိုလ်(လှိုင်)၊ ICTTI သင်တန်းဌာန ဖုန်း – ၀၁-၅၂၂၄၂၉သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ကြောင်း ၂၀၁၀ခုနှစ် မတ်လ ၂၂ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ခရီးသွားများ ကိုယ်တိုင် ငွေသေတ္တာအတွင်း ယာဉ်စီးခ ထည့်သွင်းရသည့် စနစ် အောင်မြင်မှု ရရှိမှသာ e-Ticket စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည်
ယာဉ်လိုင်းအချို့တွင် ခရီးသွားများ ကိုယ်တိုင် ယာဉ်စီးခ ထည့်သွင်းရမည့် စနစ်ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပြီးယင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်ရန်အတွက်လည်းအဆိုပါယာဉ်လိုင်းများတွင်ယာဉ်ကြီးကြပ်များထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ယာဉ်လိုင်းမှတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကဆိုပါသည်။ ငွေသေတ္တာထဲသို့ ခရီးသည်များ ကိုယ် တိုင်ထည့်ပြီးကားစီး ရမည့်စနစ်အောင်မြင်မှသာ နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုနေသည့် e-Ticket စနစ်ကို လျင်မြန်စွာ စီစဉ်ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသည်။
“တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတချို့ မှာ လိုင်းကားစီးတဲ့အခါ အသုံးပြုနေတဲ့ e-Ticket စနစ်ကို ပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုဖို့အတွက် ဖေ ဖော်ဝါရီလ ၁၅ရက်နေ့ကစပြီး ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကနေ ပါရမီကို ပြေးဆွဲနေတဲ့ ယာဉ်လိုင်းအမှတ် ၂၃၂ ယာဉ်နှစ်စီးကစတင်ကာ ခရီးသည်များ ကိုယ်တိုင် ယာဉ်စီးခကို ငွေသေတ္တာထဲ ထည့်ပြီး ကားစီးတဲ့စနစ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ ဒီစနစ်ကို ယာဉ်စီးတဲ့ ခရီးသည်တွေနားလည်ပြီး အကျင့်ဖြစ်အောင် အဲဒီယာဉ်တွေမှာ ယာဉ်ကြီးကြပ်တစ်ယောက်ထားရှိသွားပါမယ်။ခရီးသည် တွေအနေနဲ့က ယာဉ်နောက်လိုက်နဲ့လည်း စကားမပြောရတော့ဘူး။ငွေအကြွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့လည်း စကားပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုတစ်လအတောအတွင်းမှာခရီးသည်တွေ အနေနဲ့လည်း အဆင်ပြေတာတွေ့ရှိတဲ့အတွက် ဒီစနစ်ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ အထက်ကတာဝန်ရှိ သူကို တင်ပြထားပါတယ်။ ဒီစနစ်ဆောင်ရွက်ရာမှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာ အခွန်ဝန် ကြီးဌာနတို့နဲ့လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်” ဟု တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြခဲ့သည်။ ဆက် လက်ပြီး “ယာဉ်စီးသူတွေဘက်ကလည်း သစ္စာရှိရမယ်၊တာဝန်သိရမယ်။ မြို့ကြီးသားပီသရ မယ်” ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗန္ဓုလသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ပါ ရမီမြို့တွင်း ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း တွင် စီးတီးဘတ်စ်ယာဉ်စုစုပေါင်း ၅၉၆ စီးရှိကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်မတ်လ ၂၄ရက်နေ့ထုတ် Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထား ပါ သည်။
ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေး သတင်းနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းလိုင်း ၃၆ မျိုးအား တည်ဆဲနှုန်းထားများမှ အကောက်ခွန် သုည ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ချ
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား- မန္တလေး ခရီးစဉ် အမှတ် (၃၇) အဆန်၊ အမှတ်(၃၈) အစုန်အမြန် လူစီးရထားများ ၁၆ နာရီဖြင့် နေ့ချင်းပေါက် ပြေးဆွဲမည်
မြန်မာ့စီးရထားက ခရီးသည်များ သွားလာမှု အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက်မန္တလေး -မြစ်ကြီးနား- မန္တလေးခရီးစဉ် အမှတ် (၃၇) အဆန်၊ အမှတ်( ၃၈) အစုန် အမြန်လူစီးရထား များကိုမတ် ၂၄ရက်မှစ၍ ၁၆နာရီဖြင့် နေ့ချင်းပေါက် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။ အမှတ်(၃၇) အ ဆန် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားခရီးစဉ်၌ မန္တလေးမှ နံနက် ၄ နာရီခွဲတွင် ထွက်ခွာပြီးရွှေဘို၊ ကော လင်း၊ မိုးညှင်းဘူတာများ၌ ရပ်တန့်ပေး၍ မြစ်ကြီးနားသို့ ည ၈ နာရီခွဲတွင် နေ့ချင်း ပေါက် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အမှတ်(၃၈) အစုန်မြစ်ကြီးနား- မန္တလေး ခရီးစဉ်၌ မြစ်ကြီးနားမှ နံ နက်၎နာရီခွဲတွင် ထွက်ခွာပြီးမိုးညှင်း၊ ကောလင်း၊ ရွှေဘိုဘူတာများ၌ ရပ်တန့်ပေး၍မန္တလေး သို့ ည၈နာရီခွဲတွင် နေ့ချင်းပေါက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အမှတ်(၃၇) အဆန်၊ အ မှတ်(၃၈) အစုန်နေ့ချင်းပေါက် အမြန်လူစီး ရထားများ အချိန်စာရင်းကို ပြင်ဆင်လိုက်ခြင်း ကြောင့် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား- မန္တလေး ခရီးစဉ်တွင် ပြေးဆွဲနေသော အမှတ် (၄၁)အဆန်၊ အမှတ်(၄၂)အစုန်၊ အမှတ်(၅၅)အဆန်၊ အမှတ် (၅၆)အစုန်၊ အမှတ်(၅၇) အဆန်၊ အမှတ် ( ၅၈) အစုန်ရထားများ၏ အချိန်စာရင်းများကိုလည်း ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲမည် ဖြစ် သည်။ အမှတ်(၄၁) အဆန်ရထားသည် မန္တလေးမှ ညနေ၆နာရီခွဲတွင်ထွက်၍နောက်တစ် နေ့ညနေ ၆နာရီခွဲတွင် မြစ်ကြီးနားသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်(၄၂) အစုန်ရထားသည် မြစ်ကြီးနားမှ နံနက် ၅နာရီတွင်ထွက်၍ နောက်တစ်နေ့နံနက်၎နာရီမိနစ် ၂၀တွင် မန္တလေး သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အမှတ်(၅၅) အဆန်ရထားသည် မန္တလေးမှမွန်းတည့် ၁၂နာရီ တွင် ထွက်၍ မြစ်ကြီးနားသို့နောက်တစ်နေ့နံနက်၈နာရီတွင် ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး အမှတ် ( ၅၆) အစုန်ရထားသည် မြစ်ကြီးနားမှ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ထွက်၍ မန္တလေးသို့ နောက်တစ်နေ့နံနက် ၅နာရီ ၄၅မိနစ်တွင် ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ အမှတ်(၅၇) အဆန် ရထားသည် မန္တလေးမှ ညနေ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင်ထွက်၍ မြစ်ကြီးနားသို့ နောက်တစ် နေ့မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး အမှတ်(၅၈) အစုန်ရထားသည် မြစ်ကြီး နားမှ မွန်းလွဲ ၁နာရီ ၄၅မိနစ်တွင်ထွက်၍ မန္တလေးသို့ နောက်တစ်နေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား- မန္တလေးခရီးစဉ်တွင်ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည့် အမှတ်(၄၁) အဆန်၊ အမှတ်(၄၂) အစုန်၊ အမှတ်(၅၅) အဆန်၊ အမှတ်(၅၆) အစုန်၊အ မှတ်(၅၇)အဆန်၊ အမှတ်(၅၈) အစန်ရထားများသည် မူလရပ်တန့်ပေးသည့် ဘူတာစဉ် အတိုင်း ရပ်တန့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အမှတ်(၃၇) အဆန်အမြန်လူစီးရထားအတွက်လက် မှတ်များကို မန္တလေး ဘူတာတွင် ၃ ရက် ကြိုတင်၍ လည်းကောင်း၊ လမ်းခရီးဘူတာများ တွင် ၁ ရက်ကြိုတင်၍ လည်းကောင်း၊ အမှတ် (၃၈) အစုန် အမြန်လူစီး ရထားအတွက် လက်မှတ်များကို မြစ်ကြီးနားဘူတာ၌ ၃ ရက်ကြိုတင်၍လည်းကောင်း၊ လမ်းခရီးဘူတာ များတွင် ၁ရက်ကြိုတင်၍ လည်းကောင်း ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၀ခုနှစ်မတ် လ ၁၉ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။